Ezi njem na njem nlegharị anya na Bonaire | Otu Di na Nwunye
Àgwàetiti Bonaire kacha mara amara maka 'mmiri na-asọ mmiri n'ụwa na ụgbụ mmiri, mmiri na-acha anụnụ anụnụ na sapphire na ihe ọkụkụ na-aga n'ihu. Nke kacha nta n'ime agwaetiti "ABC" na Antilles Leeward, ọ bụ nnukwu na omenala, njem, nri na ntụrụndụ. Na ọnụ ọgụgụ nke naanị 18,000, na ezigbo enyi gị, ị gaghị ahụ ebe ọ bụla ọzọ, Bonaire dịka otu n'ime nzuzo nzuzo nke Caribbean. Ọ bụ ezie na asụsụ gọọmentị bụ Dutch na Papiamentu, Bekee na-edekwa ihe, ọtụtụ ndị bi na-asụkwa asụsụ anọ ma ọ bụ karịa. (Papiamentu bụ Spanish Creole asụsụ nke na-agụnye mmetụta nke Portuguese na Dutch.)
Ezi ego nke ịnyịnya ibu Bonaire
Isi Obodo: Kralendijk
Kralendijk (akpọ kray-len-dike) pụtara "coral coef" ma ọ bụ "coral dike". Na Papiamentu, a na-akpọ obodo ahụ Playa ma ọ bụ "osimiri". Obodo a nke dị nso n'ụsọ oké osimiri Bonaire bụ ebe na-atọ ọchị ma na-eme egwuregwu iji gaa, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma na ịnabata ndị nwe ụlọ na ndị ahịa. Kralendijk bụ nke dị nnọọ mma, ọ bụkwa ebe dị ukwuu na-awagharị mgbe otu ụbọchị dị n'ụsọ osimiri.
asụsụ: Dutch na Papiamentu, ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ na agwaetiti na-asụ Bekee. Ọtụtụ ndị bi na-asụ asụsụ anọ ma ọ bụ karịa!
Ego: Dollar United States (USD)
Ike Ike: Na Bonaire, ihe ntanetị bụ 127V na 50Hz, ma ọnụahịa Europe na US dịka ọkọlọtọ. Otú ọ dị, jide n'aka na ị ga-eleba ụlọ nkwari akụ gị iji jide n'aka na ị nwere ezigbo nkwụnye (ọ bụrụ na ọ dị mkpa). Ụdị outlets nwere ike ịbụ ụdị A, B & F.
Nọmba Mberede: Call 911 akpa. Ọnụọgụgụ a bụ onye otu, yabụ ọ bụrụ na ọ dịghị onye zara, kpọọ 717-8000 (mpaghara). Nọmba ekwentị mberede maka ụgbọ ala ahụ bụ 114.
Gụkwuo Banyere Bonaire!
Njem Na-ezighị ezi: Otu esi echekwa ego na oge ezumike gị
Dịka ihu igwe na eburu, na-eme njem oge. N'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa, enwere oge na oge dị oke ala iji atụ anya ka ndị ọbịa bido ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa. Ị ga-aga na obere oge? Ọzọkwa, gịnị bụ ala-oge? Ihe ndị a na-ekpebi ihe "oge dị elu" dịgasị iche iche, ma dabere na ebe onye ọbịa ahụ si abịa dị ka ... GỤKWUO
By Tracy | Nwere ike 30, 2017 | 2 Comments